NAB Show New York သည် Podcast စီးရီးနှင့်သီးသန့် Podcast အစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » NAB Show New York သည် Podcast စီးရီးနှင့်သီးသန့် Podcast သင်တန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
NAB Show New York သည် Podcast စီးရီးနှင့်သီးသန့် Podcast သင်တန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Show ကိုနယူးယောက် NAB သာလကွာသည်, ပြုလုပ် 15,000 တက်ရောက်နှင့် 300 ပြသခဲ့သည်ကျော်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤဖြစ်ရပ်သည်ကဲ့သို့သောဒေသများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်ဟုညီလာခံနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အတူမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်များအဘို့မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာအတွက်အကောင်းဆုံးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်:
ကော်ပိုရိတ် A / V ကို
အဘယ်အရာကိုမှာမျှော်လင့်ရန် NAB ပြရန် New York
ဤသည်အောက်တိုဘာလ, NAB ပြရန် New York ကသူတို့ဧကန်အမှန်အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏စိတ်ကူးစုဝေးကြလိမ့်မည်အရာကိုဆောအဖြစ်ပြပွဲရဲ့ themes များကိုမီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်ဟုပီ featuring Podcast တခုကိုစီးရီးစတင်ပါလိမ့်မည်။ အသစ် Podcast တခုကိုစီးရီးအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ပါလိမ့်မည် MediaVillage အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာနှင့်စျေးကွက်၏ဦးခေါင်း, eb မော့စ်။ အားလုံးစီးရီးဇာတ်လမ်းတွဲဟာအပေါ်စက်တင်ဘာလ 16 အပေါ်တစ်ဦးသည် Periodic ဖက်ရှင်အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် Show ကို podcast NABမှာရရှိနိုင်သည့် nabshowny.com.
MediaVillage ရဲ့ B2B Podcast တခုကို၏အိမ်ရှင်အဖြစ်, Insider InSites နှင့် တိုးတက်မတူကွဲပြားခြင်း ကုမ္ပဏီများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားထုတ်မှုကိုကြီးကြပ်နေချိန်တွင် Podcast တခုကို, eb မော့စ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ဦးဆောင်မီဒီယာ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာအဖွဲ့အစည်းများ၏အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူ strategize ပါလိမ့်မယ်။
အများအပြားကဦးဆောင် Podcast တခုကိုအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးကဲ့သို့သော Stitcher, iHeartRadio နှင့် Westwood တစ်ခုမှာ သီးသန့်မှာ featured ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် နယူးယောက်။ ဤရွေ့ကားညီလာခံအစည်းအဝေးများအဆိုပါ All-အသစ်များကိုအတွက်အောင်မြင်သော Podcast တခုကိုဖွင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အဓိကထားပါလိမ့်မယ် pop-Up ကို Marketplace & ပြဇာတ်ရုံ ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 17 ။
Lemonada Liftoff: သင် Podcast တခုကိုကွန်ယက်စတင်ခြင်းအကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံး
သင့်ရဲ့ podcasts မဟာဗျူဟာအဘို့အ audio Insights
အောင်မြင်သော Podcasts အမှတ်တံဆိပ်ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့
Cumulus မီဒီယာမှာသမ္မတ, Westwood One နဲ့ EVP ကော်ပိုရိတ်စျေးကွက်
Lemonada မီဒီယာမှာစီအီးအို & ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
အဆိုပါ "Lemonada Liftoff: သင် Podcast တခုကိုကွန်ယက်စတင်ခြင်းအကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံး" session ကိုထိုမိနျးမကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Podcast တခုကိုကွန်ယက်၏ခရီးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် Lemonada မီဒီယာ နှင့် Westwood တစ်ခုမှာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်။ အဆိုပါ Westwood တစ်ခုမှာသင်တန်းသားများကိုနိုငျငံတျောသမ်မပါဝငျမညျ Suzanne အညစျအကွေး နှင့် Lemonada မီဒီယာပူးတွဲတည်ထောင်သူ, CEO နဲ့အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ ဂျက်စီကာ Cordova Kramer.
Stitcher မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (CRO)
session တစ်ခုက "သင့်ရဲ့ podcasts မဟာဗျူဟာအဘို့အသံ Insights" Stitcher ရှိသည်နှင့်ပုလိမျ့မညျ Vox မီဒီယာ Podcasts ကွန်ယက် podcasts တွေကိုအောင်မြင်သောစေသောနောက်ကွယ်မှ-The-မိုက်ခရိုဖုန်း element တွေကိုဆန်းစစ်။ Stitcher ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး စာရာဗန် Mosel ကြော်ငြာထိရောက်မှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တိုးမြှင့်ဖို့အစေခံကြောင်း key ကိုအသံဖိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Podcasts Host က "Stuff သင်ဟာသမိုင်းကြောင်းအတန်းအစားထဲမှာလွတ်သွားသော"
အဆိုပါ "ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့အောင်မြင်သော Podcasts အမှတ်တံဆိပ်" session ကိုတွဲပြီး eb မော့စ်အားဖြင့်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည် iHeartMedia ရဲ့ သမတ Conal Byrne နှင့် "သင်ဟာသမိုင်းကြောင်းအတန်းအစားထဲမှာလွတ်သွားသောပစ္စည်းပစ္စယ"Podcast တခုကိုအိမ်ရှင် Holly Frey.
Show ကိုနယူးယောက် NAB လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မှာအောက်တိုဘာလ 16-17, 2019 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည် Javits ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ။ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံးအမေရိကတိုက်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ထောက်ခံအားပေးမှုအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ NAB ညီတူညီမျှအကောင်းဆုံး, ၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အခွင့်အလမ်းများကိုသိမ်းယူဖို့ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်နေစဉ်, ဥပဒေပြုစည်းမျဉ်းများနှင့်အများပြည်သူရေးရာများတွင်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအကျိုးစီးပွားတိုးတက်စေရန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ များအတွက်စာနယ်ဇင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန် NAB ပြရန် နယူးယောက်ပြီးရင် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ NAB အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.nab.org.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့် အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း eb မော့စ် iheart ရေဒီယို မီဒီယာကျေးရွာ NAB Show ကိုနယူးယောက် NAB Show ကို podcast NAB ရေဒီယို Stitcher ရုပ်မြင်သံကြား Vox Vox မီဒီယာ Westwood တစ်ခုမှာ 2019-09-20
ယခင်: Forbes မဂ္ဂဇင်း "30 လက်အောက်တွင် 30" အတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးအသံ Lounge ဟာရဲ့ Becca Falborn